Jetstream esithandweni ngesandla. Ukukhiqizwa pyrolysis kubhayela
Ukungabikho esithandweni isakhiwo ngamalahle noma ugesi Ungahlala inzuzo ngokusebenzisa fuel zemvelo okuluhlaza - izinkuni. Ngaphezu kwalokho, lo mthombo ushibhile ngokuziqhathanisa kakhulu nge ezibizayo igesi yemvelo. Yingakho abanikazi abaningi namuhla senqabe izindlela zanamuhla Ukushisa kanye ufuna okunye ukushisa imithombo. Kulezi zimo, aid singafinyelela ukwakhiwa ezifana Jetstream esithandweni. izandla zabo ukwenza imishini enjalo kuyinto ngempela ngempela, kodwa kufanele siqale ngokucabangela e kabanzi mayelana nokuthi yini kule divayisi futhi kusebenza kanjani.
Umqondo jikelele pyrolysis
Umgomo we kubhayela pyrolysis liqukethe noqhekeko ezishisayo of izinto kokuba eziyinkimbinkimbi amakhemikhali ukwakheka, kuyilapho engahlosile ukuxhuma iyiphi enye reagents. Lokhu kusho ukuthi wokuqhekeka molecule yesici esithile ibe izingxenye aphansi ukuxegiselwa. Kuyinto lesi simanga ngokuthi pyrolysis.
Leli cebo kusebenza eliphuma kuso sonke emizini yabazalwane, lapho kungekho Ukushisa umile. Kufanele kuqashelwe ukuthi pyrolysis ehlanzekile ungachazwa ukuthi nokwahlukana izakhi fuel endaweni ngaphandle ukufinyelela-mpilo esitsheni ethize, bese amagesi okuholela ezidla phakathi accumulator futhi wasebenzisa lapho kudingeka.
Inzuzo enkulu izinhlelo ezifana wukuthi izinto yengezwe amandla omlilo kungaba ngokuqondile ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ngaphezu kwalokho, lo mshini uyakwazi usebenze kunoma iyiphi uphethiloli okuqinile kanye nokugcina izinga lokushisa oyifunayo phakathi nenkathi sasivumela eside.
Umklamo kubhayela pyrolysis amandla omlilo
Ngo zinsizakuphila esithandweni somlilo inezingxenye ezimbili. Eyokuqala yeseli umthwalo - lapha kokuncinyane oksijini pyrolyzed fuel ukusha, futhi kuzo zonke ezikhethiwe inqubo amagesi kuthiwa evutha phansi ingxenye idivayisi yesibili, obizwa ngokuthi i-chamber amandla omlilo. Kukhona kakade ohlabe umkhosi emoyeni yesibili, futhi ukushabalalisa ukushisa lincane kakhulu.
Pyrolysis kubhayela libhekene yokuthi ukwehlukana izingxenye ezimbili ezakhiwe ngokusebenzisa grate camera preforms. Thola ngaphakathi emoyeni sidlula kwesihlahla kusukela phezulu kuya phansi, futhi kuba lesi sici liwuhlukanise kusukela kweminye imishini yasendlini Ukushisa Imishini.
heater okunjalo abe ukumelana sokunciphisa umoya lapho zindiza, okwenza kube nesidzingo okusalungiswa ophoqelelwe, ngezinye izikhathi kwenziwe nge exhauster ekhethekile, hhayi standard ezimweni ezinjalo fan.
Isimiso ezisebenza ka pyrolysis kubhayela
Njengoba yaziwa, a boilers pyrolysis omlilo bahlinza isimiso ukuthi ukhuni ukubola ngaphansi ukushisa, ukuvula ekugcineni ku amalahle (okuqinile asalile) kanye ingxube oluyingozi.
Ngenxa inqubo okwenzeka ekamelweni ukulayisha, generator igesi ikhishwe, okuyinto sidlula kubhayela umlomo wombhobho baxhumana emoyeni yesibili futhi combusted. Izinga lokushisa ke elilingana 1200 ° C. Ingxube kwaphumela kwaba Kwabiwa oluyingozi ephambana le Ukubika Inkinga YeWindows ingxenye umzimba ukushisa, akunika amandla zalo eziyinhloko, futhi ngemva idivayisi okukhipha ngokusebenzisa kushimula.
Bobabili emakamelweni engaphakathi imishini embozwe ulwelwesi ekhethekile evimbela Ukungena lomlilo. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukwandisa izinga lokushisa ngaphakathi emshinini futhi ukudala izimo izinkuni esivuthayo evumayo nalefanele.
Izinzuzo ukhuni boilers
Ukukhiqiza pyrolysis kubhayela ngezandla zakhe, kubalulekile ukuqaphela izinzuzo main yaleli imishini liwuhlukanise kusukela kumadivayisi efanayo ukusetshenziselwa ukufudumeza.
A semali ekamelweni ukulayisha nekghono eliphezulu enze kube nokwenzeka ukuba isekele lokushisa sanikelwa isikhathi sasivumela eside kuqhathaniswa kumadivaysi ezivamile. Kukhona amamodeli ukuthi abasakwazi uyakwazi ukusebenza amahora angu-24 nomunye kuphela nqwaba nophethiloli.
Pyrolysis boilers bakudinge esincane yokuhlanza, kusukela enqubeni omlilo of umule is hhayi kukhiqizwa, kanye nenani umlotha ekhiqizwa incane.
Imikhiqizo omlilo kule imishini mancane eyingozi empilweni uma iqhathaniswa izinga namanye amadivayisi, kusukela inani izinto cancerogenic ngesisekelo kubo ingasaphathwa. Ingxube etholwe kwayo kuleyo ndawo yokuhweba, ingxenye enkulu siqukethe carbon dioxide futhi umhwamuko, okuyinto akunakwenzeka ukuba zingaba ingozi empilweni yomuntu.
Enye inzuzo abahlukene ezijatshulelwa kubhayela endlini pyrolysis - yikhono ulungise amandla uhla enkulu kakhulu (kusuka 30 kuya ku-100%). Ngaphezu kwalokho, idivayisi has a umsebenzi eyincithakalo engenamuntu bangcolisa umoya, okuyinto kunomphumela omuhle izimo zezemvelo kanye microclimate ezakhiweni.
Okokhelekayo isicelo pyrolysis omlilo kubhayela
fuel kahle esetshenziselwa imishini enjalo, - ugodo kokuba ubude mayelana 400-450 mm ububanzi 100 kuya ku-250 mm. Kanye izingodo lonke kanye sawdust kungaba ashiswe, kodwa imfucuza ezinjalo akufanele kuthathe ngaphezu kuka-30% ukusetshenziswa ivolumu ekamelweni.
Kuyinto elungile ngaphezulu ukuze usebenzise lokhu kokusebenza nomswakama kabani sibalo ingeqi 40%. Lokhu akugcini nje kwenza ukusebenza kwe-apharathasi iyashelela, kodwa futhi baphile isikhathi eside service yayo. Izinyathelo ezinjalo zokuphepha kukhona kalula wachaza: 1 kg ukhuni kokuba nomswakama ka 20%, kudedela amandla 4 kW / h futhi ngesikhathi nomswakama 50% unikeza umthamo ofanayo iniketa kuphela 2 kW / h.
Lokho kusho ukuthi ukushisa kanye amandla omlilo kahle kuyinto encike ngqo kwi inani lamanzi ezikuyo: isikhathi eside kangaka, sibi uyoba yini umphumela. Ngakho-ke, ngaphambi nje kulayishwa ugodo kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi womile kahle futhi ayiqukethe umswakama ngokweqile.
AmaSu pyrolysis kubhayela
Ukuze uqonde ukuthi singakanani impahla ofuna ukusebenzisa ngesikhathi sokufaka, kuyancomeka ukuba bafune usizo izikimu akhethekile kudivayisi imishini. imidwebo ezihlukahlukene pyrolysis kubhayela Ungahlala kutholakale ongoti abasebenza imisebenzi efanayo.
Ngakho, circuit lokhu apharathasi ngokuvamile ubonisa indawo ilungiselelo somlilo, a umzimba ukushisa, kanye ezweni lapho amanzi Siyonikwa.
Kubalulekile ukuxhuma zonke izingxenye kubhayela ngokuhambisana Umdwebo isakhiwo sonke basebenza kahle futhi enokwethenjelwa. Ungakhohlwa ukuthi umoya kokupholisayo ezingasibulala-ngempumelelo kulungele egumbini. Leli qiniso kusivumela ukusindisa ingxenye enkulu izimali esichithwa Ukushisa, ikakhulu lapho uqhathaniswa nezinye ezifanayo ngenhloso ezakhiwe.
Amathuluzi ukwenziwa pyrolysis kubhayela
Ukuze ekudalweni esizimele lokhu imishini kuyadingeka etholakalayo ezithile izinto asekelayo. Kudingeka nokuba ukuqoqa ulwazi oluningi mayelana nenqubo, eziqala izinto consumable enhlanganweni. Ngemva kwalokho okudingekayo ukuze ngokuphumelelayo ukubala zonke nemingcele ukunquma oda yini okufanele uhlobo kahle amandla omlilo ukuthi kufanelekile egumbini lakho elithile, njengoba kungase kube ezimbili: noma slot-sikaphalafini, noma grates. Zonke izincwadi ezidingekayo obandayo zihlale kungathengwa ezitolo DIY ezikhethekile, njengoba namhlanje, kufanele kuphakama izinkinga kukhethwa.
Ngakho, ukukhiqizwa kwanoma pyrolysis kubhayela kudinga amathuluzi ezilandelayo:
Steel ishidi 4 mm obukhulu;
steel pipe ne ipharamitha efanayo;
round induku 20 mm ububanzi;
amapayipi eziningana uhlobo iphrofayli;
amadivaysi elawula lokushisa;
fan centrifugal isampula;
amantongomane imishudo, ayezosebenza njengabaqondisi yasibamba impahla.
inhlangano ngesandla pyrolysis kubhayela
I-algorithm self-ukukhiqizwa imishini enjalo kumelwe nakanjani ancike ukudweba pyrolysis kubhayela esivuthayo okuqhubekayo. Inqubo inhlangano yabantwana bakwa-kudivayisi senzeka ngezigaba eziningana:
Isinyathelo sokuqala ukusika amashidi steel futhi amapayipi, okuwenza aqondane ku parisons ngoba kubhayela umzimba, esithandweni yayo kanye ezipholile. Kubalulekile ukukhumbula aphathe imiphetho impahla nge isondo ukugaya futhi ukukhomba izindawo kwabashiselayo.
Ngemva kwalokho kufanele ukulungiselela wonke amathuluzi adingekayo umhlangano zedivayisi.
Khona-ke ungakwazi aqale ukwakha umzimba inqubo. Lolo hide luqala ngo ngendlela elandelayo: odongeni ekupheleni ibekwe etafuleni Welding, bese nalokho by indawo welds enamathiselwe spacers labetibambile ohlangothini ubuso, phezulu kanye phansi.
Ngaphezu kwalokho, le nqubo kumele uye ukufakwa esithandweni somlilo kubhayela, ngaphakathi lapho sonke isimiso umelwe emashalofini evundla embozwe grate. Futhi, iduduzekile emphinjeni umlomo wombhobho, akhonza njengesigaba ukususwa olefins.
Ngemva kwalokho okudingeke ukuba baqale inhlangano lamakholomu gqwa negesi Ukupholisa, okuyinto qhaqha ebiyelwe esithandweni futhi wandise kancane ukudlula lokho. Zisekelwe igemfe, ukufakwa i-kwenziwa wazalela izindlu.
Khona-ke kulandela idivayisi yesibili ukukhiqiza ekamelweni kubhayela, okuyinto Kumele uxhumeke kukholamu indlu. Kulesi sigaba ungafaka yesibili, udonga okucishe kufane nalokhu umzimba ukulungisa bafudumale. Kusukela kuqala it is ahlukaniswe ukwahlukanisa.
Uqhubeka inqubo ukuhlangana nokufaka vozduhoobmennika kushimula ipayipi.
Isinyathelo sokugcina - ukusetha wokugcina (phambili) udonga izindlu, ifakwe iminyango kanye podduvalom.
Le ndlela zendlela yokwenza Jetstream esithandweni ngezandla zabo, iyona kungase kutholakale kakhulu futhi enokwethenjelwa, it kuyashesha futhi kulula ukusebenza.
Kungenzeka yini ukwenza esithandweni kusukela ibhodlela?
Ngokuvamile, abanikazi, hhayi kokuba ngakwesokunene izinto ezidingekayo ukwakha, isixazululekile ekuklanyweni kubhayela ngokurhaba. ukulalelisisa Ikakhulukazi ikhokhelwa sinekhono kuncibilike igesi yemvelo, okuyinto has simise oyindilinga kanye usayizi ofanele. Ngaphezu kwalokho, ukushuba ezindongeni umkhumbi oluhambisana nemingcele oyifunayo.
Noma kunjalo ukwenza Jetstream esithandweni kusukela isilinda igesi is hhayi Kunconywa. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi nezindlu thuluzi siqukethe steel ejwayelekile, kabi ngokudlulisela ukushisa nezinye kumakhemikhali okungenakugwenywa, ngisho ekamelweni izimo lokushisa.
Kodwa musa ngokuphelele ayiyeke le ibhaluni, ngoba kungaba ukudlala indima ithangi amanzi ashisayo endlini encane yangasese, ngaphezu, ngenxa yobukhulu bayo encane, Ukushisa oyokwenziwa ngokushesha, futhi ezakheke ivumela isikhathi eside ukuze ifudumale ngisho nalapho esebenzisa inyumbazana kakhulu elula. Kodwa uma unquma ukusebenzisa ibhaluni, imidwebo pyrolysis kubhayela kuyoba engadingekile ngokuphelele - ukuyifaka ke kungcono ukuwenqaba.
izimo zokusebenza ezidingekayo
Umsebenzi pyrolysis kubhayela, kanye kunoma iyiphi enye idivayisi ukuthi isebenza lapho zihlatshwa nomlilo, yebo, namanye amathuba. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ningabi nje kuphela kahle ukuhlomisa lonke uhlelo, kodwa futhi unakekele mayelana imithetho ukuthobela imithetho yokuphepha.
Ngakho ngokwenza Jetstream esithandweni ngezandla yakho, udinga ukuba acabangele amaphuzu alandelayo:
Ukufakwa kwazo kumelwe kwenziwe kuphela ezakhiweni okungezona zokuhlala;
kungakuhle ukuthi isisekelo kubhayela wenziwe ukhonkolo noma isitini ukuze ugweme Ukushisa okweqile luthi alufane;
iyunithi kufanele kubekwe ukuthi akukho eduze kuka cm 30 kusukela izindonga izinto egumbini;
igumbi kubhayela kubalulekile ukuhlinzeka izinga ukupholisa wehluke inqubo ukuhwamuka waphumela ngaphandle.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhumbula ngisho into eyodwa: yena kubaluleke kakhulu ukuxoxa ngefasitele ukufakwa kuphothulwe esebenzisa amaminerali uvolo ngaphakathi ipayipi ngeke iqoqe itiyela condensate.
Alternative gasification boilers
Naphezu indlela ngokomthetho yokukhiqiza leli thuluzi, abanye abanikazi baye bathola izindlela indlela yokukwenza nezinye izinto.
Ngokusho eziningi, umklamo kubhayela amandla angaphansi kuka-15 kW, akunandaba mqondo. Kodwa ngezinye izikhathi ungafuni ukudala onjalo zezinhlobo okukhulu, ikakhulukazi uma indawo phansi incane. Ngenxa yalezi zinjongo, futhi kukhona ukhetho ukudala esithandweni pyrolysis, ezifanayo impahla yayo futhi izici sangaphandle isibilisi. Ukhathazeke ukusebenza imishini enjalo akudingekile, kusukela isimiso omlilo of ithi ayifane.
Ukuze kukhiqizwe lokhu isampula uzodinga uhla elandelayo letitinhlobonhlobo:
ishidi steel nge ukushuba mayelana 4 mm;
isitini of zobumba;
umnyango, futhi esetshenziswa ukuze kufuthwe ekamelweni;
cast iron grate;
thermostat isigwedlo hlobo.
Lokhu esithandweni elinye endinganisweni kubhayela amandla omlilo futhi pyrolysis efanelekayo ngokuphelele ukufakwa e iliphi igumbi. Uma wayefisa, wonge imali leli thuluzi kuyoba owusizo futhi kuzokwenza eliphezulu futhi isikhathi eside ukufudumeza sonke isakhiwo.
Ifomu i-indlela engadini. Ngezandla zabo, wena ukuhlomisa endaweni suburban
Element izinkukhu ngezandla zabo: ezishibhile, esebenza kahle fast and
Izikebhe Homemade ukudoba kanye nokungcebeleka
Indlela yokwenza ibhethri amandla nokunamathisela ngomthofu yensimbi ngezandla zabo?
Imizi elikhulu Urals: incazelo emfushane
Ihhotela AquaSplash Thalassa Sousse 4 * (Tunisia / Sousse): izithombe kanye nokubuyekeza
Licorice impande izingane: izinkomba kanye indlela yokuphathwa
"Gerpevir" (wamafutha): Umyalelo, intengo, incazelo, ukubuyekezwa. Isicelo yamafutha okugcoba "gerpevir" ngesikhathi sokukhulelwa
Ophahleni okuqinile. Ukuqinisa.
Indlela ukupheka isaladi zakudala squid
Kuthengiselana acabangwayo futhi izimpawu zaso